ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): November 2007
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:18 AM 1 comments Links to this post
အာဆီယံထိပ်ဆီးဆွေးနွေးပွဲအား ဆန္ဒပြခဲ့သော မှတ်တမ်းဖိုင်
Posted by LIN LET KYAL SIN at 10:41 AM7comments Links to this post
Labels: Myanmar, News And Activities, Overseas Burmese Patriots, Videos
သိပ်အားမာန်ပါတဲ့သီချင်း ၊ နှလုံးသားကို ရိုက်ခတ်နိုင်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ ။ အားလုံးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
သံဃာ ရှိခိုးကိုးကွယ်ခဲ့တို့တွေ ဒါဟာ တို့ဘုရားရှင်ရဲ့ သားမြတ်တွေ
A7 Dm F E7
သယ်ပိုးပေးဝေဆဲ ဗုဒ္ဓအမွေ ခုများတော့ ပျက်သုန်းတော့မယ်ဟေ့….
အာဏာယစ်မူးတဲ့ စောက်ရူးသန်းရွှေ ဘာသာပျက်စီးရာကိုရှေုးရှုနေ
ငါတို့အတွက် အသက်စွန့်ထား ဘုန်းကြီးတွေ မိုက်ရိုင်းစွာရိုက်သတ်တယ်လေ….
ဒို့ခေါင်းများလဲ သွေးစိုရွှဲပစေ ဘယ်တော့မှတော့ဦးမညွတ်ဘူးဟေ့
ဒါဏ်ရာကိုအံတုရင်း ခြေကန်ကာမာန်ဟုန်သွင်း ရဲရဲတောက် ဒို့ဝိဥာဉ်တွေ…
CHO: A7 Dm G7 C
မျိုးဆက်သစ် ဒို့ရဲ့သွေးတွေ တွဲလက်တို့ ဆက်နေဆဲဟေ့
အာဏာကိုဖီဆန်ရင်း လေဆန်မှာအတောင်ဖြန့်ရင်း ခွပ်ဒေါင်းများကရှေ့ဆက်ပျံနေ….
ဒီအလိမ်အညာများလဲ ကမ္ဘာကသိနေ ဘလေ့ာဂါ ရဲဘော်တွေ ထိုးနှက်နေ
ဘယ်တုန်းကမှအရှက်မရှိသော စောက်ခွက်တွေ ကမ္ဘာကြီးကိုဆက်တိုက်လိမ်နေ….
အမှန်ကိုပြောဖို့ဆို ကြောက်ရွံ့နေ လူအရှင်ကြီးကိုတောင်မီးရှို့ပေ
ဒီရက်စက်တဲ့ မိစ္ဆာဆိုးဒိဠိတွေ ဘ၀တိုင်း ပြန်သတ်ရပါစေ….
Posted by LIN LET KYAL SIN at 10:27 AM2comments Links to this post
မြန်မာပြည်မှာ ကြံ့ဖွတ်တွေရဲ့ ဘလော့ခ်သင်တန်းရှိနေသတဲ့ ။
ကျွန်မ ပါးစပ်ကလေးပွင့်သွားအောင် အံ့သြသွားသည် ။ ကျွန်မ ဘလော့ခ်စရေးချိန်က သင်ဆရာ မရှိ ၊ မြင်ဆရာ မရှိ ၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတာကို ကိုယ်ကရေး ၊ အပြင်အဆင်ကိုတော့ ဟိုလူ့ကိုမေး ဒီလူ့ကိုမေး ၊ သူငယ်ချင်းတွေအကူညီယူ .. ဒါနဲ့ပဲ လင်းလက်ကြယ်စင်ဘလော့ခ်ဆိုတာ ဖြစ်လာခဲ့တာပါ ။ လူငယ်တွေကို နည်းပညာ ၊ အသိပညာ ပိုပြီးအသိဥာဏ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ဆိုတဲ့ နအဖရဲ့ ဟန်ပြရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့ သဖန်းသီးလေးလိုပဲ အပြင်ပန်းလေးက လှပါတယ် ။
မြန်မာဘလော့ခ်လောကမှာ ဘလော့ခ်အရေအတွက်က အများကြီး ပိုများလာပါတယ်။ အခုတစ်လော သတိထားမိသလောက်တော့ မျိုးမစစ်တွေ တအားများလာတာပါပဲ ။ ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကို ဥာဏ်မှီသလောက် ကျွန်မစဉ်းစားနေမိသည် .. ။ ဘလော့ခ်အရေအတွက်တွေ များလာတာ ၊ အသိဥာဏ်တွေ ပိုပွင့်လာမယ်လို့ ထင်ရရင်တော့ ကောင်းတက်ဘက်ကလို့ ဆိုရမှာပေါ့ .. ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီး စွတ်အော်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အမှောင်ကမ္ဘာထဲမှာပဲ ဆက်လက်တည်ရှိနေမှာပဲ .. ။
ဘလော့ခ်ဆိုတာကိုတောင် သင်တန်းတွေပေး ၊ ဒီလို တန်ပြန်စစ်ထိုးမှုတွေ လာတယ်ဆိုတော့ စစ်အာဏာရှင်လူတန်းစားတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အမှန်တရား ရိုက်ချက်တွေ ဘယ်လောက်ခပ်ပြင်းပြင်းထိသွားလဲ မှန်းဆလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဘလော့ခ်တွေမှာ အချင်းချင်းရန်လာတိုက်ပေးတာတွေ ၊ ဆဲဆိုတာတွေကို စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ငယ်သားတွေ ပြုလုပ်နေပေမယ့် ပြောပုံဆိုပုံကို ကြည့်တာနဲ့ ခွဲခြားတတ်တဲ့ ကျွန်မတို့ဘလော့ခ်ဂါတွေကြောင့် သူတို့လုပ်သမျှအားလုံးက လက်ညောင်းတာပဲ အဖတ်တင်နေမှာပါ။ ပြည်တွင်းဘလော့ခ်ဂါတွေ တိုးလာမယ်ဆိုရင် လူငယ်တွေအတွက် အပြင်လောကတစ်ချို့နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိစပ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်တော့ ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။
ကျွန်မ မနက်က ဘလော့ခ်အသစ်လေးတစ်ခုကို မျက်စိလည်လမ်းမှားပြီး အလည်ရောက်သွားသည်။ မြင်လိုက်ရသော ပုံကြောင့် မျက်ဝန်းထဲ လျှပ်စီးလက်သွားသလို ခေါင်းကိုလည်း ပူထူသွားသည် ။ အမေစုပုံကို လဲလျောင်းနေတဲ့ ဘုရားမျက်နှာတော်နေရာမှာ ထည့်သွင်းထားပြီး အဆောင်အယောင်တွေအပြည့်နဲ့ ပုံတစ်ပုံအဖြစ် ဖန်တီးထားလို့ပါပဲ ။ ကျွန်မ အသက်ရှုရပ်မတတ်တောင် ဖြစ်သွားသည် ။ စိတ်ထဲမှာ `လူရောဟုတ်ရဲ့လား ၊ အမျိုးယုတ်ဒိဌိ ၊ ဘာသာတရားကိုနားမလည်ဘူးလား´ဟူသော စကားများသာ ပဲ့ထင်နေသည် .. ။ သာသနာကို စော်ကားလိုက်တာဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ ရုတ်တရက်တော့ အတော်ပူထူသွားသည် ။ စက္ကန့်ပိုင်းမျှကြာမှ စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ပြီး မျက်နှာလွှဲပစ်လိုက်သည်။ ကျွန်မ အီမိုးရှင်းတွေများတာကို ထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်ဟု အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးကြိုးစားနေတာကြောင့် နောက်ပိုင်း စိတ်ကိုသိပ်လွှတ်မပေးတော့။
ကျွန်မတို့ မြန်မာဘလော့ခ်လောက အတော်စည်ကားလာဖို့ အလားအလာ ရှိနေသည်။ ထို့အတွက် ကျွန်မတို့ ဘလော့ခ်ဂါတွေ ၊ အနုပညာကို ဖန်တီးသူတွေ ၊ အမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုလွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေ အားလုံး ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ။
၁) အကုသိုလ်ဘလော့ခ်တွေကို သူတို့ဘာလုပ်နေသလဲ သိသင့်တယ်လို့ ယူဆရင် ဖတ်ချင်ရင်သွားဖတ်ပါ။ ဘာမှ သွားမပြောပါနဲ့ ။ ကျွဲပါးစောင်းတီး မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျွဲပါးစောင်းပြတ်နေတဲ့လူတွေကို အရေးမလုပ်ပါနဲ့။
၂) ကျွန်မတို့အားလုံး စာများများဖတ်ရပါ့မယ်။ ၀ါသနာပါတဲ့ စာပေတွေအပြင် အသိဥာဏ်ပညာ ၊ ဗဟုသုတအားလုံး တိုးတက်စေနိုင်တဲ့ စာတွေကို ကျွန်မတို့ အားလပ်ချိန်တွေမှာ ဖတ်ရပါ့မယ်။ ဒါမှ ကျွန်မတို့က professional တွေဖြစ်လာမှာပါ။ စိတ်ခံစားမှုအပိုင်းရော ၊ အလုပ်လုပ်တာရော အားလုံးမှာ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း တခါတရံ စိတ်က ခံစားမှုတွေနဲ့ရောထွေးကုန်တတ်တဲ့အတွက် ထိန်းချုပ်နေရပါတယ်။
၃) ကျွန်မတို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီ ပိုက်ဆံရှိသလောက် ၊ ရသလောက်စုရပါ့မယ် ။ သူများကို လျှောက်ပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူး ။ မိမိအတွက် လိုအပ်ရင် အမြဲတမ်း လက်ထဲမှာ ငွေတိုငွေစတွေ ရှိဖို့အတွက် ၊ ရှေ့လျှောက်အနာဂတ်မှာ ဘာပဲလုပ်လုပ် ငွေဆိုတာလည်း လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ ။ တစ်လ တစ်လ ရသမျှကို အပြတ်သုံးပစ်ကြတဲ့ အကျင့်လေးတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၄) ကျွန်မတို့ လူတွေအားလုံးမှာ နည်းပါးတဲ့ မေတ္တာတရားကိုလည်း မပြတ်အောင် ဆုပ်ကိုင်ထားရပါ့မယ်။ တခါတလေ ဒေါသကြောင့် ၊ စိတ်ခံစားမှုတွေကြောင့် မေတ္တာက မပါဝင်တော့တဲ့အခါ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ကုန်တတ်ကြပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်ကို သည်းခံခွင့်လွှတ်အမျှဝေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး ။ မိမိအတွက် ၊ မိမိလုပ်နေတဲ့အရာတွေအတွက် ၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်က ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ ၊ ဆက်ဆံသမျှလူအားလုံးနဲ့ပတ်သတ်လာရင် အတ္တစွဲလေးတွေ ကင်းစင်နေရင် သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းက ပိုမိုဖြောင့်ဖြူးလို့ပါ။
၅) မိမိစီဗောက်စ်တွေ ၊ ကွန်မန့်တွေမှာ အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေမယ့် အတုအယောင်တွေ ၊ နာမည်ခပ်ဆင်ဆင်တွေကို ခွဲခြားတတ်ဖို့ စိတ်ကလေးကို ကျင့်ရပါ့မယ် ။ မကြာခဏ ဘလော့ခ်ဂါတွေ အထင်မှားပြီး ပို့စ်တွေနဲ့ ရန်ဖြစ်တာတွေ ၊ ခံစားမှုတွေပွင့်တာတွေ ကျွန်မ မြင်ရတိုင်း စိတ်မချမ်းသာမိပါ။
၆) ကျွန်မတို့ လူတိုင်း လူတိုင်း သင်ယူနေတဲ့ အတတ်ပညာ ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာ ၊ ၀ါသနာပညာ အစရှိသဖြင့် အားလုံးမှာ နောက်ဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့လူတွေ မဖြစ်ဘဲ ထူးချွန်တဲ့လူတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားရပါ့မယ်။
ကျွန်မ စိတ်ထဲရှိသမျှ တွေးမိသမျှအားလုံးကို ကျွန်မ လက်ဆင့်ကမ်းဝေမျှလိုက်သလို ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း အရာအားလုံးမှာ အများကြီးလိုအပ်နေသေးတဲ့အတွက် အမြဲကြိုးစားနေရပါမည်။ ကျွန်မ နှလုံးသွေးထဲမှ စီးဆင်းလာသော ခွန်အားများဖြင့် ယုံကြည်ချက်များက ပိုမိုခိုင်မာနေလျက် .. ။ ကဲ ... ယုံကြည်ချက်တွေခိုင်မာတဲ့ အမှန်တရားအတွက် `တိုက်ပွဲ´အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တယ် .. ။
ညီကြလားဟေ့´ ........... ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:38 PM 13 comments Links to this post
Labels: Junta, My Opinion
Should we call it "Toa Payoh BURMESE Buddhist Temple Or The Branch Temple Of Kyat-Khat-Waing ?
မျိုးချစ်မြန်မာတွေ လက်သီးလက်မောင်းတွေတန်းလို့ ၊ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓါတ်တွေတက်ကြွစေတဲ့ စာတွေဖြန့်ဝေလို့ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းက လက်မခံတော့ဘူးဆိုပဲ .. ။ ချဉ်ငံစပ်အသုပ်တစ်ပွဲ စားလိုက်ရသလို ခံစားရသည် .. ။ အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို အစအဆုံးသိသူပီပီ မပြောရင်လည်းမကောင်း ၊ ပြောရင်လည်းမကောင်း ၊ ပြောလည်းမပြောချင် စုံစီနဖာဖြစ်နေသည်။
Straits Time မှ Video ကို ကြည့်ပြီးချိန် ကျွန်မစိတ်ထဲ အနည်းငယ်တော့ ချဉ်သွားသည် ။ ဒီကိစ္စက သတင်းသိပ်မြန်တဲ့ အင်တာနက်ကြီးပေါ်မှာ ပေါက်ကရလေးဆယ် ဖြစ်နေတော့ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ပါတော့မည် ။
စင်္ကာပူရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများက သွေးလှူပွဲအတွက် နေရာနှင့်အချိန်အားလုံးကို ကြေငြာပြီးချိန်မှ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ၊ မြန်မာလူမျိုးတွေ အများဆုံးသွားလေ့ရှိသော တိုပါးရိုးဘုန်းကြီးကျောင်းဧ။် ဥက္ကဌအဖွဲ့မှ ထိုပွဲကို မပြုလုပ်ရဟု တစ်ချက်လွှတ်အမိန့်ထွက်လာသည် ။ မဆိုးပါဘူး နအဖ လက်အောက်ပြန်ရောက်သွားသလိုပါပဲ .. ။ အားလုံးလည်းကြေငြာပြီးသား ဖြစ်နေတော့ မျိုးချစ်မြန်မာတွေအားလုံးက ဒီပွဲလေးတော့ ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ပေးပါခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ တောင်းတောင်းပန်ပန်လေး ရှိခိုးမတတ်ပြောတော့မှ နောက်ဆုံးအဖြစ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ် .. ။
ဘာကြောင့် လုပ်ခွင့်မပေးတာလဲ .. ။ အဖြေရှာမေးလိုက်တော့ `နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေ လက်သီးလက်မောင်းတန်းတာတွေ ပြုလုပ်လို့´တဲ့ ။ အမလေးတော် ... ။ အဲဒီအဖွဲ့ကြီးက လုပ်သမျှ အခမ်းအနားအားလုံး ကျွန်မ သွားပါတယ်။ ဘယ်တုန်းက လက်သီးလက်မောင်းတန်းလိုက်ပါလိမ့် .. ။ လင်းလက်ကြယ်စင် ခေါင်းလေးကုတ်ပြီး သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားမိတယ် .. ။ သပိတ်သွပ်ပွဲမှာ မျိုးချစ်မြန်မာတစ်ဦးက အရှေ့ကနေ `အားလုံး မတ်တပ်ရပ်ပေးပါခင်ဗျာ ၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်က နှလုံးသားထောင့်ကို ညာလက်သီးလေး ဆုပ်ပြီး ကပ်လိုက်ပါ ခင်ဗျာ ၊ ၇င်ထဲအသွေးထဲကလာတဲ့ သစ္စာအဓိဌာန်ကို အခုသီဆိုကြပါတော့မယ်´ ဆိုပြီး အားလုံး တညီတညွတ် သီဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ နောက် နိုင်ငံတော်သီချင်း သီဆိုခဲ့ကြတယ် .. ။ ဖြန့်ဝေတာဆိုလို့ လက်ကမ်းစာစောင်လေးနည်းနည်းပါ .. ။
နှလုံးသားရှိတဲ့ထောင့်ကို လက်သီးလေးဆုပ်ပြီး သစ္စာဆိုခဲ့ကြတဲ့အတွက် အပြစ်ဖြစ်သတဲ့ .. ။ နောက်တစ်ခါဆို လက်ကိုနောက်ပစ်ပြီး ဆိုကြရမယ် ထင်ပါတယ်။ လက်မမြှောက်မိအောင်လို့ပါ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ပွဲတစ်ခုခု လုပ်မယ်ဆိုတိုင်း မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးစံအရ ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးကို သွားလျှောက်ကြပါတယ် ။ ခွင့်ပြုရင် Executive Committee နဲ့ စကားပြောပြီး မျိုးချစ်မြန်မာတွေက ရှေ့ဆက်လုပ်ကြပါတယ် .. ။ အဲဒီလိုလုပ်လာတာ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဟိုးအရင်နှစ်အဆက်ဆက်က ပွဲတွေလည်း ဒီလိုပဲ လုပ်လာတာပါ ။ ဘုန်းကြီးစိတ်ဆိုးရင် အားလုံးက သွားတောင်းပန်လိုက် ၊ ချော့လိုက် ၊ ဆူရင်လည်း ခေါင်းငုံ့ခံလိုက် ဒီလိုနဲ့ပဲ မြန်မာ့နယ်ပယ်လေးအတိုင်း အားလုံးဖြစ်လာပါတယ် .. ။
မြန်မာပြည်မှ သံဃာ့အရေးအခင်းကြီးဖြစ်တော့မှ လူတွေပိုသွေးဆူလာကြတယ်။ ပိုတက်ကြွလာကြတယ် ။ ပိုအလုပ်လုပ်လာကြတယ် ။ အဲဒီအတွက် နေရာဒေသကိုတော့ မြန်မာတွေအားလုံးအဆင်ပြေတဲ့ တိုပါးရိုးကိုပဲ ရွေးဖြစ်တာ များပါတယ်။ အားလုံးက ပွဲတစ်ခုခုလုပ်တိုင်း သီလယူတယ် ၊ အမှာစကားပြောတယ် ၊ သစ္စာဆိုတယ် ၊ ခြေလှမ်းတွေဆွေးနွေးတယ် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချတယ် ။ ဒါဟာ အကြမ်းလာဖက်နေတာလည်း မဟုတ်သလို ဆိုးဆိုးရွားရွား ဘာတစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။
Executive Committee အဖွဲ့ထဲမှာ စင်္ကာပူလူမျိုးတွေ အချို့ကလည်း စာနာနားလည်ခြင်းမရှိစွာ ပါဝင်နေပါတယ် ။ `ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဘုရားရှိခိုးဖို့အတွက်ပါ´တဲ့ ။ ပြောတာကိုတော့ လက်ခံပါတယ် ။ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သတ်သမျှ လက်မခံဘူးဆိုတော့ အီးယူက ခေါင်းဆောင်တွေလာတာ ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ လာတာက ဘုရားရှိခိုးတော့ မဟုတ်ဘူး ထင်ပါတယ် ။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း စင်္ကာပူရောက်တက်ကြွသူများ လုပ်ခဲ့ကြတာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဘာတစ်ခုမှ မရှိပါဘူး ။ အော်တာ ဆူပူတာတွေဆို လုံးဝတောင် မရှိခဲ့ကြပါဘူး .. ။ ကျွန်မတို့က အခုအချိန်မှာ တော်ရုံတန်၇ုံ ဘာမှသိပ်မပြောတာ စည်းလုံးချင်လို့ပါ ။ သွေးမကွဲချင်လို့ပါ ။ ကျွန်မတို့က အခုအချိန်မှာ ပါစင်နယ်ဖီလင်တွေကို ဘေးချိတ်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်နေရတာပါ ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဘာမှသိပ်မပြောချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သိပ်လွန်လာတဲ့အတွက် ဖြေရှင်းသင့်တာတော့ ဖြေရှင်းရပါတယ် .. ။
ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးကို ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လျှောက်ထားမေးမြန်းတောင်းဆိုတော့လည်း ဘုရားသားတော်ဘုန်းဘုန်း ပြန်မိန့်ကြားလိုက်ပုံက `ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းကို တည်ထောင်တုန်းက မြန်မာတွေ အများဆုံးထည့်တဲ့ဝင်ငွေနဲ့ မဟုတ်ပါဘူး ။ စလုံးလူမျိုးတွေဝင်ငွေနဲ့စတည်ခဲ့တာ။ ငါက ဘုန်းကြီးကျောင်းကို Burmese Buddhist Temple လို့ နာမည်ပေးခဲ့တာ ။ တကယ်တော့ Buddhist Temple လို့ပဲ ပေးခဲ့လည်း ရတာပဲ ။ မင်းတို့မြန်မာတွေက ပွဲတွေလုပ်သွားပြီး နောက်ဆုံးကျရင် ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ ငါပဲကျန်ခဲ့မှာ ၊ နောက်တစ်ခါ ဘာပွဲလုပ်လုပ် ရဲဌာနက ပါမစ်ယူလာခဲ့´လို့ ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ် ။
စင်္ကာပူရဲ့အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် မြန်မာတွေက မြန်မာ့ဘုန်းကြီးကျောင်းလေးကို အားကိုးပြီး လူစုပွဲလေးတွေ လုပ်ရတာပါ ။ စလုံးရဲတွေရဲ့ ထောက်ခံစာ ပါမစ်ကို ယူလာခဲ့ရမယ့်အစား အိပ်ပျော်နေတဲ့ ကျားကို ကလိသာသွားထိုးလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။
မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းဟု အများကသတ်မှတ်ပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေ အများဆုံးလာ ၊ မြန်မာလူမျိုးတွေက အဲဒီနေရာမှာပဲ အလှူအတန်းလုပ် ၊ မြန်မာ့ဘုန်းကြီးကျောင်းလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာကြီးတစ်ခုကို ကျွန်မ ရင်ထဲမှာ အများကြီးဝမ်းနည်းခံစားသွားရပါတယ် .. ။ ကျွန်မတို့ဘက်မှာ ရပ်တည်ပေး ၊ အားပေးခဲ့တဲ့ မျိုးချစ်ဘုန်းဘုန်းတွေကိုတော့ အစဉ်လေးစားဦးခိုက်လျက်ပါ။
မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းမှာ သံဃာတွေရဲ့သွေးတွေ မြေပေါ်ကို အများကြီးစီးဆင်းခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီအတွက် မခံရပ်နိုင်စွာ စင်္ကာပူမှာ အားလုံးက သတိကြီးစွာထားပြီး မြန်မာ့အရေးအတွက် နိုင်တဲ့ဘောင်တစ်ခုကနေ အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ် ။ ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးကို အားမပေးဘူး ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာလုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုမှ လက်မခံဘူးဆိုရင် မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းလို့ အမည်မတွင်ပါနဲ့တော့ ။ မြန်မာတွေလည်း ပွဲလမ်းသဘင်တွေ သွားလုပ်မနေပါနဲ့တော့။
ကျွန်မတို့အသိုင်းအ၀ိုင်း သူငယ်ချင်းအားလုံးထဲမှာ ဒီကိစ္စကို အားလုံးက မကျေမချမ်းဖြစ်ကြပါတယ် ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို မသွားတော့ဘူးဆိုပြီး နီးရာကိုလည်း အကြောင်းကြားကြတယ် ။ မြန်မာ့အရေးအတွက် လုပ်နေတာတွေအားလုံးကို ဆန့်ကျင်အပြစ်ပြောတဲ့ လူသားချင်းမစာနာတဲ့ ဥက္ကဌအဖွဲ့ကိုရော ၊ ရှိသမျှအားလုံးကိုပါ စိတ်ကုန်မိပါတယ် ။ နောက်လ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့ ကျွန်မ၁၉နှစ်မွေးနေ့မှာ တိုပါးရိုးကျောင်းမှာ အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်ပြီး အလှူအတန်းကြီးတစ်ခုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ကိုလဲ တခြားဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပဲ ကျွန်မရွေးချယ်လိုက်ပါတော့တယ် .. ။
`မြန်မာတွေ မလှူလည်း ပြဿနာမရှိဘူး´လို့ ခံယူထားမှတော့ အခြားလှူစရာနေရာတွေ ပေါပါတယ် ။ နယ်စပ်မှာ ဒုက္ခသည်တွေ သွားလှူရတာမျိုးကအစ လှူမယ့်နေရာတွေ အများကြီးပါ မိတ်ဆွေတို့ရယ်။
ဒီလိုပြဿနာတွေကို စိတ်ရှုပ်မိရင်း ၁၇ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သော မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါး မိန့်ကြားခဲ့သော `ဒေါ်လာစားဘုန်းကြီးများ´ ဆိုသော အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ကျွန်မ လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေမိပါတော့တယ်။
ပီနန်ဆရာတော်ကြီး ကြွလာပြီး ဖြေရှင်းပေးမှာကို အားလုံးက စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးနဲ့မျိုးချစ်မြန်မာတွေ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းက သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံး မျက်နှာချင်းဆိုင် ထပ်ဆွေးနွေးပြီးလို့ လုံးဝဒီအခြေအနေအတိုင်း မတိုးတက်လာရင်တော့ သပိတ်မှောက်ရပါ့မယ် ။ ရာဟူးဂရုတွေ ၊ စီဗောက်စ်တွေ အခြားနေရာတွေမှာလည်း အမြင်တူတာတွေရော ၊ မတူတာတွေရော စုံနေပါတယ်။ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပါပဲ။ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က ဘုန်းဘုန်းမို့လို့ လူတွေကိစ္စ၀င်မပါဘူး ၊ အေးအေးဆေးဆေးသာ မိန့်ကြားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုတွေဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အခုက ဘုန်းကြီး မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ စကားတွေအပေါ်မှာ မြန်မာတွေက ရင်တအားနာသွားတာပါ။ ကျားကြောက်လို့ သူ့အားကိုး ၊ သူက ကျားထက်ပိုဆိုး .. ။ ( ကန်တော့ပါသေးရဲ့ ၊ ရင်ထဲရှိသမျှခံစားသမျှ အမှန်တရားအားလုံးကို ရေးသည်မို့ ငရဲနှင့်လွတ်မည်ဟု ထင်ပါသည်)
Posted by LIN LET KYAL SIN at 2:11 PM 17 comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 12:45 PM 1 comments Links to this post
Questions & Answers From Discussion On Burma Affair (17th November)
နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က စင်္ကာပူရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများရဲ့ မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားမှာ OBP ကို မေးကြတဲ့ မေးခွန်းတွေအားလုံးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ မေးခွန်းတွေများတဲ့အတွက် JPEG ဖိုင်နဲ့ ဖော်ပြရင် ကျွန်မ ဘလော့ခ်စာမျက်နှာတွေ တအားပြန့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အမေး အဖြေတွေအားလုံးကို PDF File ဖြင့် ဒီနေရာမှ ဒေါင်းလော့ခ်ဆွဲယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင် ။ သံဃာတော်များကို မေးခဲ့ကြတဲ့ မေးခွန်းများကို မကြာခင်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
Labels: Articles, News And Activities, Overseas Burmese Patriots
အနာဂတ်မဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အဖမဲ့ အိမ်ယာမဲ့ ကြယ်စင်တစ်စင်း
ရင်နင့်အောင် စာနာတယ်ဟဲ့ နှမရဲ့။
ရွှေပြည်အေး တရားတွေ ပဲ့တင်ထပ်
သမီးရေ … မင့်အဖေကို မြင်လှည့်ပါဦးကွဲ့လို့မှ
အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသူ အိပ်စက်တယ်…
သမီးကို အားကိုးသူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အိပ်စက်တယ်…
မြေချ ဂူသွင်း ဥပေက္ခာပြုခြင်းတွေနဲ့
၀င်သွားတဲ့နေ ထာဝရ ပျောက်ဆုံးပါစေ…။
မိခင်ကို ယုတ်မာ ဖခင်ကို ထောင်သွင်း
ငရဲပြင်းတွေ ထွန်းကားတဲ့ မြေသားပေါ်မှာမှ
ပရဟိတ အသိတရားနဲ့ လူဖြစ်ချင်သတဲ့လား။
အဖေ့ကလေးတွေ လက်ကလေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်လို့
သူ့ခမျာ သောကတွေနဲ့ …
သမီးရေ … မလာနဲ့ သမီးရဲ့
ဟောဒီ ငါ့သမီးလေး …
သွားရတော့မယ်သမီး ဖွဖွလေး ငြီးရင်း
အဲဒီမျက်ရည်တွေ စီးဆင်း လူသားဆန်ခြင်းနဲ့
ငါတို့မြေ ငါတို့ရေအတွက် ……။ ။
(စစ်အာဏာရှင်၏ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မည့် ဘေးမှ ပုန်းရှောင်နေရသူ
မဖြူဖြူသင်းနှင့် မိသားစုအား ထပ်တူထပ်မျှ စာနာမှုဖြင့် …)
Posted by LIN LET KYAL SIN at 12:01 AM 1 comments Links to this post
အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအား Orchard တွင် ဆန္ဒပြခဲ့သော မျိုးချစ်မြန်မာများ - ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇
(Straits Times သတင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သော ဓာတ်ပုံ)
ကားလမ်းတစ်ဖက်ကို ကူးလိုက်ချိန်မှာ Are you lin let kyal sin ? ဆိုပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ဖမ်းခနဲမေးတော့ ပထမ ကျွန်မစိတ်ထဲ `ဟိုက် ဒုက္ခပဲ ။ ဆန္ဒတောင်မပြရသေးဘူး ။ ငါ့ကိုလာဆွဲပြီထင်တယ်´လို့ တွေးလိုက်ပြီး ဟုတ်ပါတယ်လို့ ပြန်ဖြေတော့ အဲဒီအမျိုးသမီးနဲ့ခပ်လှမ်းလှမ်းကလူတွေ ၀ိုင်းအုံလာပြီး သူတို့က Strait Times သတင်းစာကပါဆိုတော့ အဲဒီအခါကျမှ ကျွန်မလည်း စိတ်အေးရပါတယ် ။ သူတို့က ကျွန်မကို လက်ရှိလုပ်မယ့် အရာတွေကို မေးပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ဆန္ဒပြမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲသိတာ ၊ ကျန်တာ ဘာမှမသိတော့ ဘာဖြေရမှန်း မသိတာနဲ့ ကြည့်ကောင်းအောင်ပဲ ဖြေပေးခဲ့ပါတယ် .. ။ `အာဆီယံက မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကို ကျေးဇူးပြုပြီး နားထောင်ပေးပါ ။ စစ်အစိုးရပြောသမျှ နားထောင်ယုံကြည်မနေပါနဲ့´လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ မိတ်ဆွေ ကိုဂျေမိုးရောက်လာပြီး သူ့ခံစားမှုတွေအားလုံးနဲ့တကွ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ သံဃာများအရေးအခင်းကို မြန်မာပြည်သူလူထုတွေ ဘယ်တော့မှ မမေ့ကြောင်း ၊ စစ်အာဏာရှင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရေး အစရှိသဖြင့် မြန်မာပြည်သူလုထုရဲ့ ခံစားမှုတွေကို ပြင်းထန်စွာ ပြောကြားပါတယ် .. ။
ရဲတွေနဲ့အကျေအလည်ပြောပြီးချိန်မှာ အားလုံးက ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းခွဲဖို့ လက်တွဲဖြုတ်လိုက်ကြပါတယ် .. ။ မျိုးချစ်မြန်မာလူကြီးတွေအနားမှာ အားလုံးက ၀ိုင်းထားပေးပြီး ရဲတွေက တစ်ယောက်ကိုဆွဲရင် အကုန်လိုက်မယ်ဆိုပြီး အသင့်ပြင်ထားကြပါတယ် .. ။ ကျွန်မကို Identity Card တောင်းတော့ ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဖုန်းနာပါတ်ပါမေးတော့ ပေးလိုက်ပါတယ် .. ။ အခြားလူတွေကိုလည်း သူတို့လိုက်တောင်းပါတယ် . .။ ဒါကတော့ သိပ်မဆန်းပါဘူး .. ။
ညီညွတ်စွာ ငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်းနဲ့ မိမိတို့စိတ်ထဲရှိသော ခံစားမှုကို ဆန္ဒပြပြီးချိန်မှာ ကျွန်မတို့အားလုံး ကျေနပ်အားရစွာ လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ် .. ။ Orchard MRT ကိုအရောက် ကျွန်မတို့ Ticket ဖြတ်မယ် လုပ်တော့ ကျွန်မနဲ့ အခြားပါလာတဲ့ မိတ်ဆွေ၃ယောက်ကို အနောက်ကနေ ပုခုံးကို လှမ်းဆွဲတာနဲ့ အားလုံးက ရုတ်တရက်လန့်ဖျပ်ပြီး ရုန်းတော့ အနည်းငယ် ရုတ်ရုတ်သဲသဲလေးဖြစ်သွားပါတယ် ။ ကျွန်မက ကျွန်မကို ဘယ်ကောင်လာထိလဲဆိုပြီး စိတ်တိုစွာပြောတော့မှ သူတို့က အမြန်အဆန် သူတို့ကဒ်တွေကိုထုတ်ပြပြီး သူတို့က ရဲတွေဖြစ်ကြောင်း ၊ ကျွန်မတို့ကို မေးစရာရှိလို့ဆိုပြီး ဘေးမှာ ခနရပ်ခိုင်းပါတယ် ။ ကျွန်မတို့ Identity Cardတွေ ထပ်တောင်းပြီး သူတို့ရေးမှတ်နေကြပါတယ် ။ ကျွန်မတို့က ကျွန်မတို့ကို နောက်တခါ အဲဒီလို ရိုင်းရိုင်းပျပျမဆက်ဆံဖို့ ၊ ကျွန်မတို့က ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း တင်းမာစွာ ပြောတော့မှ ရဲတွေက ကျွန်မတို့ကို မျက်နှာချိုလေးနဲ့တောင်းပန်ပါတယ် .. ။ ကျွန်မတို့က ကျွန်မတို့ကို ခေါ်ထားရခြင်းအကြောင်းအရင်းကို ခပ်မာမာမေးမှ သူတို့က ဘာမှသိပ်မဟုတ်ကြောင်း ၊ အိုင်စီထပ်မှတ်ချင်လို့ပါဆိုပြီး ပြောလာပါတယ် .. ။ သိပ်မကြာခင်မှာ ကျွန်မတို့ကို ဘာမှ ဆက်မမေးတော့ဘဲ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ ကျွန်မတို့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ် .. ။
လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ကျွန်မကို စိုးရိမ်စွာမေးသူတွေ ၊ သတင်းမေးသူတွေကို ကျွန်မ တောက်လျှောက်ဖြေကြားပေးရင်း စိတ်ထဲမှာလည်း ကျေနပ်မှုတစ်ခုတော့ ရလာခဲ့ပါတယ် ။ စင်္ကာပူလို တင်းကျပ်လွန်းလှတဲ့ နိုင်ငံမှာ ကျွန်မတို့ စိတ်ဆန္ဒကို မီဒီယာတွေကနေတဆင့် အများပြည်သူတွေရှေ့မှာ အောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ပဲ ကျွန်မ ကျေနပ်မိပါတယ် .. ။ ထူးခြားတာတစ်ခုက အားလုံးက သိပ်သွေးစည်းညီညွတ်ကြပြီး ဖြစ်လာသမျှကို လက်တွဲပြီး အတူတကွ ရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ပြင်ထားကြခြင်းပါ . ။ အဲဒီစိတ်ဓါတ်ကနေရလာတဲ့ အားမာန်တွေ ၊ ခံစားမှုတွေက ပိုမိုတောက်ပြောင်လာပါတယ် .. ။ ဒီဆန္ဒပြပွဲသတင်းကို နောက်ကျမှသိလိုက်ရပြီး မပါဝင်နိုင်ခဲ့သူတွေက နောင်တစ်ကြိမ်ဆို သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပေးကြဖို့အတွက် သူတို့ဖုန်းနာပါတ်တွေ ကျွန်မကို မက်ဆေ့ခ်ျတွေနဲ့ပို့လာကြပါတယ် .. ။ အခုလိုမျိုး နိုးကြားစွာ ၊ သတ္တိရှိစွာ ဖြစ်လာကြတာကို ရင်ထဲကြည်နူးမိပါတယ် .. ။
ကျွန်မတို့ကို စင်္ကာပူရဲတွေက ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မှာလဲ ... စောင့်တော့ကြည့်ရမှာပဲ .. ။ ပြဿနာတော့ သိပ်မရှိပါဘူး . .။ ခံဝန်ချက်ထိုးထားတဲ့ ကျွန်မအနေနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် ကွန်ပြူတာလာသိမ်းစရာတော့ မရှိတော့ပါဘူး ။ ကျွန်မတို့ တိုက်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲလေးအတွက်ပဲ အားမာန်တွေပိုမိုဝင်လာပြီး ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခြေလှမ်းတိုင်းမှာ ကောင်းသထက်ကောင်း ၊ ထိရောက်သထက် ထိရောက်အောင်အတွက် သံဓိဌာန်ချထားမိပါတယ် . .။ ဒီနေ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာအားလုံးကိုလည်း ကျွန်မ အထူးလေးစားကျေးဇူးတင်ရှိမိပါတယ် .. ။ အိုင်စီတောင်းခံရ ၊ ဖုန်းနာပါတ် တောင်းခံရတဲ့ လူများအားလုံး ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်မကို contact number လေးတွေ မေးလ်နဲ့ ပို့ပေးစေချင်ပါတယ် ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရဲကဆက်သွယ်လာရင်လည်း ကျွန်မတို့အချင်းချင်း အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ကြဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့ရှင် .. ။
Singapore protest laws won't be relaxed: activists
စင်္ကာပူလူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူအဖွဲ့မှ မှတ်တမ်းထင်သားသော ဖိုင်
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:15 PM 24 comments Links to this post
Labels: Lin Let Kyal Sin, Myanmar, News And Activities, Overseas Burmese Patriots
ကျွန်မ ဒီသတင်းကိုရေးရတာ စလုံးရဲတွေနဲ့ပတ်သတ် အန္တရာယ်တော့ရှိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လုပ်ပေးချင်စိတ်လေးက များနေတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချမယ်ကွာဆိုပြီး စိတ်ပိုင်းဖြတ် ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ အာဆီယံနိုင်ငံတွေက သဘောထားတွေကို မြန်မာတွေက မကျေနပ်တာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမယ်လို့ ကျွန်မ သတင်းကြားသိခဲ့ရပါတယ် .. ။ လာတဲ့လူတွေကို ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် ဘယ်သူမှ ဦးဆောင်တာမဟုတ်ဘဲ လာတာလို့ သတ်မှတ်ပါမယ်လို့လည်း ကြားသိခဲ့ရပါတယ် .. ။
နေရားOrchard Hotel ရှေ့မှ Starbuck Coffee Shop
အချိန်းညနေ ၆နာရီတိတိ
အနီရောင်တီရှပ်ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပါလို့ ကြားသိခဲ့ရပါတယ် .. ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 2:21 PM4comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 1:42 AM 8 comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 5:02 PM0comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဖိုးထိုက်တန်လှသော မိန့်ခွန်းတွေကို ကျွန်မဘလော့ခ်မှာ မနှစ်က ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ .. ။ အဲဒီမိန့်ခွန်းတွေက ဒီ Freedom From Fear စာအုပ်ထဲက ကူးယူဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ကျွန်မ ဒီစာအုပ်ကို လက်ဝယ်ရရှိတာ မှတ်မှတ်ရရ စင်္ကာပူမှာရှိတဲ့ အိုးဝေအဖွဲ့ကို မနှစ်က ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အလည်ပတ်သွားရောက်တဲ့နေ့ကပါ .. ။ စာရေးတဲ့ ကျွန်မအတွက် အိုးဝေက ကျွန်မလေးစားရပါသော ဦးလေး UWM က ကျွန်မကို အမှတ်တရ လက်ဆောင်အဖြစ် ဒီစာအုပ်ကို လက်ဆောင်ပေးပါတယ် ။ ကျွန်မ ဖတ်ပြီးချိန်မှာလည်း သိပ်သိပ်ကို ကြိုက်ခဲ့ရပါတယ် .. ။ အခု အွန်လိုင်းမှာ PDF File နဲ့တွေ့တော့လည်း အများကြီးဝမ်းသာမိပါတယ် .. ။ ကျွန်မတို့အားလုံး ဖတ်သင့်ဖတ်ထိုက်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ .. ။ အားလုံးကို ကျွန်မ လက်ဆင့်ကမ်းဝေမျှလိုက်ပါတယ်ရှင်။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 2:32 AM 1 comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 3:37 PM2comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 4:23 PM9comments Links to this post